I-OTA-16 ifika ngaphezulu kwesithathu seebinaries ezihlaziyiweyo | Ubunlog
I-OTA-16, ngoku iyafumaneka kuguqulelo lwesibini lwe-Ubuntu Touch ebaluleke kakhulu kwimbali yayo
IPablinux | | Ubuntu, Ifowuni yeBuntu
Ukuphela kwe-2020, i-UBports waphosa Inguqulelo yenkqubo yayo yokusebenza yeselfowuni eyenza uphuculo olukhulu. Enye yazo ibambe umdla wam: utshintsho loyilo kunye nolunye uphuculo olwenziwe kwisikhangeli sayo esingagqibekanga, iMorph Browser. Kwaye, kwinkqubo yokusebenza apho isikhangeli sisetyenziswa kakhulu, ibilutshintsho olungaphaya kokuyimfuneko. Kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo, iprojekthi inayo ilahlwe ngaphandle la I-OTA-16 ye-Ubuntu Touch, kwaye kukhutshwa okukhulu kunokuba kuvakala.
Ngapha koko, emva kokukhankanya izixhobo ezitsha ezixhaswayo ngu-Ubuntu Touch, i-UBports isixelela ukuba yi Ukukhutshwa kwesibini ngobukhulu kwimbali yoBuntu bokuBamba, esele kuphela emva kwe-OTA-4 eyayikunye nayo apho batsiba khona ngokusekwe kwi-Ubuntu 15.04 ukuya ku-Ubuntu 16.04 apho inguqulelo yangoku isekwe. Kodwa ikwakhona ukuba i-OTA-16 ilungiselela indlela yokutsiba okunye okubalulekileyo okuza kwenzeka phakathi ku-2021.
1 Amagqabantshintshi e-OTA-16
2 Sele ikwisixhobo sakho
INexus 7 2013 (iimodeli zeWi-Fi kunye neLTE)
Sony Xperia yeCwecwe Z4
Qt 5.12.9, inyuke ukusuka kwi-v5.9.5. Oku kuvula indlela yokulayisha isiseko ku-Ubuntu 20.04.
Ngaphezulu kwesithathu sezibini eziguquliweyo kolu khululo.
Ukuphuculwa kwesikhangeli seMorph:
Ukuphuculwa kwenkqubo yokukhuphela. Ngoku ayisosikrini esipheleleyo kwaye ubona i icon engentla eshukuma xa ukhuphelo lugqityiwe.
Iphepha lokukhuphela likwabandakanya iphaneli "Yokukhutshelwa Kwamva Nje".
Kongezwe ulawulo kumlawuli wethebhu ekuvumela ukuba uphinde uvule eyona thebhu ivaliweyo kutsha nje.
Ngoku ijongeka ngcono, nokuba siyisebenzisa kwimowudi yedesktop okanye ukuba siyisebenzisa kwithebhulethi.
Inkxaso yokurekhoda ividiyo yenziwe yasebenza kwizixhobo ze-Android 7.
Inkxaso yeGStreamer eyenza ukukhawulezisa izixhobo kwikhamera yePinePhone.
Isifakeli se-Anbox sibandakanyiwe ngokungagqibekanga, kodwa kuya kufuneka uyenze ngesandla ufakelo.
Sele ikwisixhobo sakho
Ubuntu Bamba i-OTA-16 ngoku iyafumaneka kwisiteshi esizinzileyo sezixhobo ezixhaswayo, kubandakanya iPinePhone kunye nePineTab. Kodwa kuya kufuneka uthathele ingqalelo, kwaye ke ii-UBports ziyakhumbula, loo nto kwizixhobo ze-PINE64 zibonakala ngolunye amanani.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Ubuntu » Ifowuni yeBuntu » I-OTA-16, ngoku iyafumaneka kuguqulelo lwesibini lwe-Ubuntu Touch ebaluleke kakhulu kwimbali yayo
I-apostrophe, omnye umhleli osimahla kunye novulekileyo ongumhleli weMarkdown
IPlasma 5.21.3 ifika ilungisa iibugs, kodwa akukho namnye onobuzaza